health-tips Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / health-tips
मुख गन्हाउछ यो उपाए गर्नुहोस
Tags: alert-news, health-tips, homeremedy, mouth, smelling
खबरडेक्स,२१ पुस । छ्या तिम्रो मुख कस्तो गन्हाएको अलि पर बस।’ यस्तो प्रतिक्रिया कुनै साथीबाट सुनियो भने जोकोहीलाई नराम्रो लाग्नसक्छ। बाहिर हेर्दा स्वस्थ देखिने मान्छेको मुखबाट दुर्गन्ध निस्किँदा नजिकको मानिसले नराम्रो प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक पनि हो। अरूले आफूलाई नराम्रो नभनिदियोस्… बाँकी अंश »
छारे रोग के हो र कसरी बच्ने ?
Tags: alert-news, chharerog, health-tips, prevention, treatment
खबरडेक्स,१२ पुस । फित्ते जुका (टेप वर्म) को फुल खानाका माध्यमले शरीरमा प्रवेश गरेपछि मस्तिष्कसम्म पुगेर पीडा दिन सक्ने घटनाको उदाहरण हुन् उनी। दुई सातासम्म निरन्तर छारे रोगले च्यापेपछि उनी स्नायु रोग विशेषज्ञकहाँ पुगिन्। उनको मस्तिष्कमा फित्ते जुकाको फुल पुगेर… बाँकी अंश »
नेपालमा फोक्सो बिगार्ने नयाँ रोग
Tags: alert-news, damage, health, health-tips, kathmandu, lungs, Nepal, new-diseases
खबरडेक्स,४ पुस ।दुवै फोक्सो काम नलाग्ने बनाउने पानीबाट सर्ने लिगिनायर्स नामक नयाँ रोग देखा परेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आइतबार रोगको संक्रमण फैलिन नदिन किटाणुमुक्त पानीको व्यवस्था नभएसम्म पानीका फोहोरा बन्द गर्न सर्वसाधारण र संघसंस्थालाई… बाँकी अंश »
जुका किन पर्छ थाहा पाउनुहोस !!!
Tags: alert-news, diseases, health, health-tips, juka, worm
खबरडेक्स,३ पाैष । खास गरेर बच्चाको पेतमा धेरै जुका पाइन्छ । तर कहिलेकाहिँ ठूला मानिसहरुमा पनि यस्ता जुका पर्न सक्छन् । बच्चाको पेटमा जुका पर्यो भने बच्चाले खाएको पौष्टिक आहाराको पोषण तत्व सबै जुकाले खान्छ । बच्चा दुब्लो पातालो र… बाँकी अंश »
दादको घरेलु उपचार कसरी गर्ने ?
Tags: alert-news, dadh, fungal-treatment, health, health-tips, home
खबरडेक्स,२ पाैष । दाद रोगले मानिसलाई हैरानी बनाउँदछ । दाद रोग चिलाउने भएको कारणले गर्दा बिरामीलाई हैरान पार्दछ । कुनै पनि शरीरभित्रका अङ्गहरुमा खराबी भयो भने दाद रोग नङ्ग, जाँघ, पेटको तल्लो भाग र अण्डकोशमा धेरै आउने गर्दछ । दाद… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, diseases, health, health-tips, in-odd, nepaljapan, pneumonia
खबरडेक्स, १९ मंसिर । निमोनिया रोग भनेको के हो? आखाले नदेखिने किटाणुबाट अचानक स्वासप्रश्वस प्रक्रियासंग सम्बन्धित अंगहरुमा संक्रमण भइ सास फेर्ने बाधा पुगेमा यसलाई स्वासप्रश्वस रोग भनिन्छ। यसले धेरैजसो फ़ोक्सोमा असर गर्दछ साथै नाक र कानमा समेत असर गर्दछ। निमोनिया… बाँकी अंश »
धेरै वीर्य खेर फाल्दा के हुन्छ ?
Tags: alert-news, birth, health, health-tips, in-odd, reproductive-health, sperm, wastage
खबरडेक्स, १८ मंसिर । वीर्यमा प्रजनन् क्षमताका लागि आवश्यक शुक्रकीट हुने भएकाले नै यसले बढी नै महत्त्व पाएको छ । सांकेतिक रूपमा हेर्दा जन्मको सुरुवात हुने बीजका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसले पाएको महत्त्व जायज नै लाग्छ । यो शक्ति… बाँकी अंश »
यूरिक एसिड बढ्यो के खाने ? के नखाने ?
Tags: alert-news, avoid, foods, health, health-tips, in-focus, uric-acid
खबरडेक्स, १८ मंसिर । रगतमा युरिक एसिड बढेर हुने जोर्नी समस्या लाई गौट–बाथरोग भनिन्छ । खान–पान र जीवनशैली सँग सम्बन्धित रोग भएकाले उचित निदान र रोगको प्रकृति, विकृति र रोगोस्थितिको उचित आँकलन पश्चात् खान–पान सुधार र जीवनशैली परिवर्तन गरेर यो… बाँकी अंश »